Fanoherana · Febroary, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Febroary, 2015
Mey 2021 9 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Febroary, 2015
Fitalahoana Nalefa Tamin'ny Minitra Farany Mba Hanajanonana Ny Famonoan'i Indonezaia Ireo Aostraliana Roa Manondrana Zava-mahadomelina
Azia Atsinanana06 Febroary 2015
"Tsy misy olona na iray aza mendrika hohelohina ho faty. na inona na inona heloka nataony #ManohanaNyFamelànaAho."
Sazian'ny Governemanta Makedoniana Ny Fakàna Sary Fihetsiketsehana Amin'ny Drôna
Eoropa Afovoany & Atsinanana04 Febroary 2015
Nanampy tamin'ny fampisehoana ny haben'ny hetsika goavan'ny mpianatra vao haingana ny sary sy lahatsary nalaina tamin'ny drôna, fihetsiketsehana lazaina ho goavana indrindra tao Makedonia hatramin'ny fahaleovantena.
Nikatso ny Aterineto Tao RDC Nandritra ny Fihetsiketseha-Panoherana an'i Kabila, 36 no Maty
Afrika Mainty04 Febroary 2015
Nahery vaika ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanitsiana ny lalam-pifidianana nataon'i Kabila izay niafara tamin'ny fahafatesan'olona 36 tao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo tao anatin'izay andro vitsivitsy izay.
Miaiky i Filipina Fa Nitondra Ireo Fianakaviana Tsy Manan-kialofana Ho Any Aminà Toeram-pisindàna Mahafinaritra Nandritry Ny Fitsidihan'ny Papa François
Azia Atsinanana03 Febroary 2015
Saingy nanindry ny governemanta fa mba nifanandrify fotsiny tamin'ny fitsidihan'ny papa ny fanofanana nampanaoviny ho an'ireo fianakaviana tsy manan-kialofana.
Afenin'i Filipina Amin'i Papa Fransoà Ny Olana Ara-Tsosialy Ao Aminy
Azia Atsinanana02 Febroary 2015
Anisan'ireo nosakanan'ny manampahefana tsy hijery an'i Papa François nandritra ny fitsidihany tao Filipina ireo mpikatroka, ankizy mpirenireny an-dalambe sy mponina mahantra.